OEM Fiberglass nanamafy FRP GRP makarakara kodiarana sy mpanamboatra | Weijia
Panam-by fanaovana makarakara vy
3D fefy vy tariby vy
Fiberglass nanamafy FRP GRP makarakara
Fiberglass nohamafisina plastika (anarana fohy FRP / GRP) tontaly makarakara. Habe normal 30x38x38mm na 38x38x38mm. Tolo-loko mavo, maitso, volondavenona, mainty, mena… habe Max: 4 ′ x 12 ′
Ny makarakara tontonana FRP dia ampiasaina matetika ho toy ny lampihazo, ho an'ny resins dia manome resin Vinyl Ester, resina ISO (isophthalic) ary resina o-phthali (Orthophthalic). Namboarina frp makarakara sy ny namboarina frp grating samy misy!
Ireto misy fiasa:
Manana fanoherana asidra tena tsara, fanoherana alkali, solvent organika ary fanoherana sira; toetoetran'ny entona sy harafesin'ny rano, ary manana fahamboniana tsy manam-paharoa amin'ny sehatry ny anti-harafesina.
Araka ny fepetra takian'ny fotoana tena fampiasana azy, ny resina o-phthalic, isophthalic, ary vinyl dia azo fidina ara-toekarena ho fitaovana matrix.
Maivana, matanjaka avo, ary mora tapaka sy mametraka azy
Amin'ny maha-fitambaran'ny resina sy fibre fitaratra, ny hakitroky azy dia latsaky ny 2 kg isaky ny decimeter toratelo, ny vy 1/4 fotsiny, ny 2/3 ny aliminioma. Ny tanjany dia 10 heny noho ny an'ny PVC hentitra, ary ny tanjany tanteraka dia mihoatra ny an'ny aliminioma sy vy tsotra. Ny lanjany maivana dia afaka mampihena be ny fanohanan'ny fototra, amin'izay hampihena ny vidin'ny tetikasa.
Tsotra ny fanapahana sy ny fametrahana azy, tsy maintsy miasa ihany ny fitaovana kely sy fitaovana elektrika, izay mampihena be ny vidin'ny fametrahana. Manohitra ny fahanterana, 20 taona mahery ny fiainam-panompoana.
Tapitra ny lelafo. Ny tahan'ny fampielezana ny lelafo amin'ny grill-retardant mahazatra (ASTM E-84) dia tsy mihoatra ny 25; ny tahan'ny fampielezana ny lelafo vilila volo maharitra dia tsy mihoatra ny 10. Ny index oxygen dia tsy latsaky ny 28 (GB 8924).
Manana insulation elektrika tena tsara izy ary tsy misy fihenan'ny herinaratra 10KV; tsy manana toetra elektromagnetika izy io ary azo ampiasaina amin'ny fitaovana manintona andriamby; ny firafitra manokana an'ny grill plastika nohamafisin'ny fibre dia manana ny toetran'ny anti-slip sy anti-havizanana ihany koa.
Ny loko dia azo fidina amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Ny loko dia azo namboarina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa. Amin'ny ankapobeny, ny lokon'ny kofehin'ny FRP dia: mavo, mainty, fotsy, maitso, manga, mena ary mangarahara na mamirapiratra. Mandritra ny fampiasana azy, loko iray dia azo ampiasaina irery na miaraka.
Fahaizan'ny famolavolana matanjaka Ny habe dia miovaova sy samihafa, mora tapaka ary milamina ny habeny
Mifandraisa aminay anio! Raisinay ny fanontanianao!
Teo aloha: Anti Skid Perforated Metal Aluminium Grip Strut
Manaraka: 3D fefy vy tariby vy
Frp bobongolo makarakara
Grp bobongolo Frp
Fitotoana fibre fitaratra
Fitsangantsanganana an-dalambe catwalk an'ny grid FRP
Fiberglass grp panels frp novolavolaina tamin'ny makarakara vy